मकवानपुरमा जन्ती बोकेको बस दुर्घटना, ३ जना जन्तीकाे गयो ज्यान! – PathivaraOnline
Home > समाचार > मकवानपुरमा जन्ती बोकेको बस दुर्घटना, ३ जना जन्तीकाे गयो ज्यान!
काठमाडौं । मकवानपुरको गौरीभञ्ज्याङमा जन्ती बोकेको बस दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृ’त्यु भएको छ भने अन्य २९ जना घाइते भएका छन् । जन्ती बाेकेर मकवानुर गढीबाट सुकाैैराकाे सातकन्या तर्फ जाँदै गरेकाे ना ३ ख ३५५६ नम्बरकाे बस ब्रेक फेल भएर बुधबार साँझ दुर्घटना भएकाे मकवानपुर प्रहरीले जनाएकाे छ ।
मृ’तक सबै पुरुष रहेकाे र उनीहरुको सनाखत हुन नसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।
सुनको मूल्य सबैभन्दा उच्च बिन्दुमा
काठमाडौं । सुनको मूल्य हालसम्मकै नेपाली बजारमा सबैभन्दा उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । बुधबार सुनको मूल्य तोलामै २२ सय रुपैयाँले बढेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
महासंघले बुधबारका लागि छापावाल सुनको प्रतितोला मूल्य ८० हजार पाँच सय र तेजाबी सुनको मूल्य ८० हजार तीन सय रुपैयाँ तोकेको छ । कोरोनाको असर विश्व अर्थचन्त्रमा पर्न थाले पछि सुनको भाउ बढेर किर्तिमानी मूल्य कायम भएको सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका महासचिव धर्मसुन्दर बज्राचार्यले बताए । मूल्य आकासिए पछि बजारमा ग्राहक चहल पहल सून्य भएको उनले बताए ।
मंगलबार बजारमा सुनको भाउ छापावल प्रतितोला ७८ हजार तीन सय र तेजावी ७८ हजारमा कारोबार भएको थियो । मंगलबार ८६० रुपैयाँ तोलामा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य भने बुधबार २० रुपैयाँले बढेर ८८० रुपैयाँ पुगेको छ ।
वीरगञ्जमा डेढ वर्षका बालकले जिते कोरोना